Studio 7 Headlines, Wednesday, September 16, 2015
Vice President Emmerson Mnangagwa, who is also the Minister of Justice, has moved a motion in parliament seeking the withdrawal of a wrong speech which was read by President Robert Mugabe in parliament yesterday.
Media organizations cry foul over moves by the Zimbabwe Broadcasting Corporation to stop airing yesterday's parliamentary session.
We will give you an update on a Zimbabwean game rancher linked to the killing of the famous Cecil the lion, who has just been arrested by police for allegedly trying to smuggle wild animals out of the country.
A Zimbabwean living in Canada Curtis Smith, known on social media as Zvirikufaya NaKedha, shares his ideas on how he has managed to bring together over 40,000 people to discuss various issues.
In the diaspora forum, we are talking to a social worker about bullied and depressed Zimbabweans living in Britain, America and other countries.
Today on Livetalk our hosts will be talking with listeners and experts about the implications of President Robert Mugabe’s misstep of reading a wrong speech in parliament yesterday.